अन्तरास्ट्रिय Archives - Nepali in Australia
January 4, 2022 autherLeaveaComment on चीनले भौतिक आक्रमण नै नगरी दुश्मनलाई पराजित गर्न सक्ने अद्भूत हतियार बनाउँदै !
काठमाडौं। अमेरिकाले दावी गरेको छ कि चीनले ‘मस्तिस्क नियन्त्रण हतियार’ विकसित गरिरहेको छ । अमेरिकाको दावीअनुसार यो हतियार विरोधीहरुलाई मार्नुको सट्टा उनीहरुलाई प्यारालाइज (पक्षघातग्रस्त) बनाउने र उनीहरुलाई नियन्त्रण गर्नको लागि गर्न सकिनेछ । यो ‘ब्रेन कन्ट्रोल वेपन’बाट चीनले दुश्मनको दिमागलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सक्छ र ऊबाट आफूले चाहेको काम गराउन सक्छ । अमेरिकाका अनुसार प्रविधिको […]
डब्लुडब्लुइका चर्चित रेस्लर द रककी छोरी डब्लुडब्लुइमा प्रवेश
December 26, 2021 autherLeaveaComment on डब्लुडब्लुइका चर्चित रेस्लर द रककी छोरी डब्लुडब्लुइमा प्रवेश
काठमाडौं। डब्लुडब्लुइका चर्चित रेस्लर तथा हलिउड सुपरस्टार ड्वेन जोनसन अर्थात द रककी छोरी पनि रेस्लर बनेर डब्लुडब्लुइमा प्रवेश गरेकी छिन् । रककी जेठी छोरी सिमोन जोनसन डब्लुडब्लुइ प्रवेश गरेकी हुन् । केही समयअघि अर्का रेस्लर रे मिस्टेरियोकी छोरी आल्याले डब्लुडब्लुइ प्रवेश गर्न चाहेको चर्चापछि अहिले रककी छोरी सिमोनको चर्चा चुलिएको छ ।सिमोनले गत वर्ष मात्र […]
December 25, 2021 autherLeaveaComment on अस्ट्रेलियामा सहमतिमा शा’रीरिक सम्बन्धपछि ब,’लात्कारको आरोप लगाउने युवती दो’षी ठ’हर
काठमाडौं। अस्ट्रेलियामा एक युवकले एक युवतीसँग शारीरिक सम्बन्ध राखिसकेपछि उनलाई सामाजिक संजालमा ब्ल’क गरिदिए । यो कुराले ती महिला यति रि’साइन् कि उनले ती युवकमाथि ब,’लात्कारको आरोप लगाइन् । यतिमात्र नभइ उनले युवकलाई ज्यान मा’र्ने ध’म्की दिएर ब,’लात्कार र लु’टपाट जस्ता ग’म्भीर आरोप लगाइन् । तर, अदालतमा उनका आरोप नि’राधार साबित भएका छन् । अदालतले […]
December 24, 2021 autherLeaveaComment on चीनले अन्तरिक्षमा धान फलाए धर्तीमा ल्याएको खुलासा, नाम राखियो स्वर्गको धान
काठमाडौं । स्वर्गका बारेमा जानकारी नभएका मानिसहरु सयदै हुनु पर्छ । स्वर्ग र नर्कका बारेमा हामी सबैले सुनेका छौँ । यो बीचमा आज हामी स्वर्गको धान लिएर आएका छौँ । पछिल्लो समय चीन विश्वभर विभिन्न रेकर्डहरू बनाउँदैछ ।अब चीन विश्वभर अन्तरिक्षमा धान उत्पादन गरेका कारण चर्चामा रहेको छ । अन्तरिक्षमा उब्जाउ भएको धानलाई ‘अन्तरिक्ष धान’ […]
December 17, 2021 autherLeaveaComment on उत्तर कोरियामा अबको ११ दिन हाँस्न नपाइने, हाँसेको देखे सिधै जेल
एजेन्सी । सबै मुलुकको आफ्नै नियम हुन्छ । उत्तर कोरियामा अरुले सुन्दा अचम्म लाग्ने नयाँ नियम लागू भएको छ । त्यहाँ हाँस्नका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । अबका ११ दिन त्यहाँका नागरिकलाई हाँस्न प्रतिवन्ध लागेको हो । हाँस्न मात्र होइन कुनै पनि प्रकारका खुशीयाली मनाउन रोक लगाइएको हो । उत्तर कोरियाली पूर्वनेता किम जोङ्ग इलको […]
तानाशाह किम जोङ उनको लेदरको जकेटको किन चर्चा हुँदैछ विश्वमा ?
November 26, 2021 autherLeaveaComment on तानाशाह किम जोङ उनको लेदरको जकेटको किन चर्चा हुँदैछ विश्वमा ?
एजेन्सी, प्योङयाङ : उत्तर कोरियाले सर्वसाधारणलाई लेदरको कोट लगाउन प्रतिबन्ध लगाएको छ । उत्तर कोरियाका तानाशाह किम जोङ उनको मुख्य रोजाइ रहेकोले सर्वसाधारणलाई कोट लगाउन प्रतिबन्ध लगाइएको हो । उन सबैभन्दा पहिला सन् २०१९ मा लेदर कोटमा देखिएका थिए । त्यसपछि सो कोट यति प्रख्यात भयो की उनको अनुशरण गर्दै त्यहाँका कुलीन वर्गले सो कोट […]
२० महिनापछि अन्तर्राष्ट्रिय सीमा खोल्ने अष्ट्रेलियाको घोषणा, डिसेम्बर १ देखि विदेशी विद्यार्थी र कामदारले प्रवेश पाउने
November 22, 2021 autherLeaveaComment on २० महिनापछि अन्तर्राष्ट्रिय सीमा खोल्ने अष्ट्रेलियाको घोषणा, डिसेम्बर १ देखि विदेशी विद्यार्थी र कामदारले प्रवेश पाउने
सिड्नी । अष्ट्रेलियाले २० महिनापछि अन्तर्राष्ट्रिय सीमा खुला गर्ने घोषणा गरेको छ । प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै डिसेम्बर १ देखि अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीसहित दक्ष कामदारलाई प्रवेश अनुमति दिइने जनाए । त्यहाँका ८५ प्रतिशत जनसंख्याले को-भि’ड-१९ विरुद्धको खोप लगाइसकेपछि सरकारले यस्तो निर्णय लिएको हो । विदेशीको लागि सीमा खुला गर्ने निर्णयसँगै झन्डै २ लाख […]
पाकिस्तानको नयाँ का’नून : ब,’लात्कार गरे आजीवन यौ’न सम्पर्क गर्न नसक्ने बनाइने
November 19, 2021 autherLeaveaComment on पाकिस्तानको नयाँ का’नून : ब,’लात्कार गरे आजीवन यौ’न सम्पर्क गर्न नसक्ने बनाइने
काठमाडौं । पाकिस्तान सरकारले ब,’लात्कार गरेको पुष्टि भएको अवस्थामा न’पुङ्सक बनाउन सकिने कनून पारित गरेको छ । पाकिस्तानको संसदले हालै पारित गरेको नयाँ विद्येयकमा यस्तो व्यवस्था समेटिएको हो । विद्येयकमा लामो समयसमम्म ब,’लात्कार गरेको प्रमाणित भएको अवस्थामा अदालताले औ’षधि दिएर आजिवन यौ’न सम्पर्क गर्न नसक्ने बनाउने गरि आदेश दिन सक्ने बताइएकाे छ । त्यसपछि उसले […]
भारतीय चर्चित नायिका प्रीति जिन्टाले दिइन् जु’म्ल्याहा बच्चालाई ज’न्म, जन्मे लगत्तै नाम समेत राखिन्
November 19, 2021 autherLeaveaComment on भारतीय चर्चित नायिका प्रीति जिन्टाले दिइन् जु’म्ल्याहा बच्चालाई ज’न्म, जन्मे लगत्तै नाम समेत राखिन्
एजेन्सी । भारतीय चर्चित नायिका प्रीति जिन्टाले आज जुम्ल्याहा बच्चालाई जन्म दिएकी छिन् । बिहिबार जुम्ल्याहा बच्चाकी आमा बने लगत्तै उनी र उनका श्रीमान जिन गुडइनफले प्रशंसकलाई इन्स्टाग्राम पोस्टमार्फत् आफ्ना जुम्ल्याहा बच्चा जन्मेको सर्प्राइज घोषणा गरेका छन् । प्रीतिले श्रीमान जीनका साथमा खिचेको तस्विर सामाजिक संजालमा पोस्ट गर्दै इन्स्टाग्राममा खुशी साटेकी छिन् । उनले सामाजिक […]
भारतले चीन सीमामा ब्राह्मोस क्षेप्यास्त्र तै’नाथ गरेपछि ग्लोबल टाइम्सले गर्‍यो कडा टिप्पणी
November 16, 2021 autherLeaveaComment on भारतले चीन सीमामा ब्राह्मोस क्षेप्यास्त्र तै’नाथ गरेपछि ग्लोबल टाइम्सले गर्‍यो कडा टिप्पणी
एजेन्सी – भारत र चीनबीच सीमा तनाव च’र्किएको बेलामा भारतले ब्र’ह्मोस क्षे’प्यास्त्र सीमामा तै’नाथ गरेको छ । त्यस कार्यले चीनलाई चि’ढ्याएको छ । चीनको सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सले ब्रह्मोस क्षे’प्यास्त्रको तैनाथीका कारण सीमावि’वाद शा’न्तिपूर्ण तरिकाले सुल्झाउन बा’धा पुग्ने ग्लोबल टाइम्सले लेखेको छ । साथै ब्रह्मोस बे’कार भएको पनि उसले उल्लेख गरेको छ ।चीन आफैंले भारतीय […]